सहमतिमै सहबास गरे पनि किन उदासीनता हुन्छन् महिला ? « Sajha Page
सहमतिमै सहबास गरे पनि किन उदासीनता हुन्छन् महिला ?
जे कुरा पनि आपसी सहमति र समझदारीमा गरेको काममा आनन्द र सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै सहबास पनि महिला र पुरुषबीच सहमति र मन खुसिले सम्बन्ध स्थापित गर्न सके निकै आनन्द प्राप्त गर्न सक्छन ।
यौन सम्बन्धले एक अर्काको सामिप्यता र माया झन् प्रगाढ र मजबुद बनाउछ । खुसि साथ गरेको काममा जहिले पनि आनन्द मिल्छ जसले जीवनमा झन् खुसि थपी दिन्छ । यौन सम्पर्कले मनको आनन्द मात्रै होइन स्वास्थ्यका लागि पनि निकै राम्रो हुन्छ । तर के तपाईलाई थाहा छ सहमतिमा यौन सम्पर्क गरेतानि महिलाहरुमा उदासिनताको भावना आउँछ ।
यो कुरा हालै गरिएको एक अनुसन्धानले दावी गरेको हो । यौन सम्पर्कपछि महिलामा उदासी क्वीन्सलैण्ड यूनीभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीद्वारा गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार यौन सम्पर्कको बेला चरमसख, अत्यधिक आनन्दको अनुभूतिका साथै उदासी पनि एक प्रकारको भावनात्मक अभिव्यक्ति हो । अनुसन्धानकर्ताले सहमतिले यौन सम्पर्क गरे पनि धेरैजसो महिलामा उदासीको भावना आउने गरेको र यो एक प्रकारले मनोवैज्ञानिक समस्या हो ।
करिब २ सय ३० महिलामा गरिएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ कि महिलाहरु यौन सम्पर्कपछि तनाव र उदासी महसुस गर्छन् । रिपोर्टका अनुसार ५ प्रतिशत महिलाहरुले यस्तो लक्षणको बारेमा बितेको चार हप्तामा महसुश गरे । जबकी ४६ प्रतिशत महिलाहरुले यसलाई जीवनमा कमसेकम एक पटक महसुश गरे ।-एजेन्सी